पोखरा Archives - Page9of 74 - Dna Nepal
चोरको निसानामा पोखराका वडा कार्यालय, पोखरा ३१ को वडा कार्यालयमा चोरी २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०८:४९
पोखरा, जेठ २३ । पोखरा ३१ नम्बर वडाको कार्यालयमा चोरी भएको छ । नहरचोकमा रहेको कार्यालयमा बुधबार राती चोरी भएको हो । ढोका फोरेर एउटा कम्प्युटर लगेको र सिपियू चाहीँ ढोकाबाहिर भेटिएको वडा सचिव रेशमलाल पौडेलले बताए । कार्यलयको प्राविधिक शाखाबाट..
पोखरामा पनि बिजुली बस चल्ने २० जेष्ठ २०७६, सोमबार १६:२१
पोखरा, जेठ २० । गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजुलीबाट चल्ने बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरामा आगामी वर्षदेखि बिजुलीबाट बस सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्ने..
घरमा बाढी पसेपछि गाउँलेजति पोखरा एयरपोर्टमा धुरिए, तालाबन्दी गर्ने चेतावनी
पोखरा, जेठ २० । निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलको काम थाल्नुअघि त्यस क्षेत्रमा ४ वटा सिंचाई कुलो थिए । विमानस्थलको काम सुरु भएपछि ति कुलो थुनियो । अहिले पानीले निकास पाएन । एयरपोर्टको आधाजसो पानी स्थानीयको घरमा पसेको छ । यो समस्या २ बर्षअघि देखिको..
होटल उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओली लञ्च खाएर फर्किए, कारण के हो ? (पढ्नुस् पूरै) १८ जेष्ठ २०७६, शनिबार १३:४३
पोखरा, जेठ १८ । पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र साढे ३ तलाभन्दा अग्लो भवन बनाउन नपाईने नियम छ । त्यो पनि फेवाताल किनार वरिपरि साढे २ तलाको मात्रै भवन बनाउन पाईन्छ । भूकम्पपछि नयाँ बस्ति विकास निर्देशिकाले जमिनको अनुपातमा भवनको उचाई बढाउन पाउने..
मापदण्ड मिच्नेलाई प्रधानमन्त्रीकै साथ ! पोखरामा मापदण्ड मिचेर बनाएको होटल ओलीले उद्घाटन गर्ने १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:२१
पोखरा, जेठ १७ । पोखराको लेकसाइड स्थित मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएको स्विस इन्टरनेश्नल होटल सरोवरको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दैछन् । महानगरको मापदण्ड विपरित भवन बनाएर होटल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सोही होटलको प्रधानमन्त्री..
पोखराका तीन ठाउँमा बम भेटियो, सेनाले डिस्पोज गर्दै १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०२:०९
पोखरा, जेठ १३ । पोखरा सहित कास्कीका ३ ठाउँमा बम भेटिएको छ । पोखराको सिर्जनाचोक स्थित एनसेल अफिसको आडमा प्रेसर कुकर बम भेटिएको छ । नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलिले डिस्पोज गर्दैछ । यस्तै नयाँबजार र न्यूरोडको बीच भाग आईडिया कलेजको अगाडी पनि बम..
पोखराको फेवातालमा २७ डुबे, ३ जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार (सैन्य अभ्यास) ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०२:३२
पोखरा, जेठ ११ । पोखराको फेवातालमा शुक्रबार करिब १२ बज्नै लागेको थियो । न कुनै हुरी, न अरु विपद् । दुई डुंगा एक्कासी डुबे । डुंगा पल्टेसंगै तालमा डुबेका २७ जनालाई बचाउन तीन वटा मोटरबोट कुदे । तत्कालै २४ जनाको उद्धार भयो । तीन जना डुबे हराए ।..
१५ करोड लागतमा खुल्यो पोखराको पृथ्वीचोकमा कुन्ती मल ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०३:२२
पोखरा, जेठ ६ । पोखराको टड्कारो समस्या बनिसकेको छ पार्किङ । बिशेषगरी शहरको मुख्य चोकहरुमा पार्किङ समस्या जटिल बन्दै गैरहेको छ । पार्किङ समस्याले एकातिर ब्यापार खस्किँदो छ भने अर्कोतिर उपभोक्तालाई मर्का परिरहेको छ । यसैलाई मध्येनजर गर्दै..
महानगरले मनपरि गरेपछि पोखराको फिर्के खोला वरिपरि डोजर नचलाउन अदालतको आदेश
पोखरा, जेठ ७ । कास्की उच्च अदालतले पोखराको मध्य भाग भएर बग्ने फिर्के खोला वरिपरि डोजर नचलाउन महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोला र सेती नदीको मापदण्ड गलत नियतले फरक गरेको र फिर्के आसपास डोजर चलाएर..
डेढलाख नगद सहित पोखराबाट ६ जुवाडे पक्राउ (४ महिला २ पुरुष को को हुन् ?) ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १५:३९
पोखरा, जेठ ३ । पोखराबाट ठूलो रकम सहित ६ जुवाडे पक्राउ परेका छन् । पोखरा ७ मासबाटरमा डेरा गरि बस्ने ३५ बर्षिया मुना गुरुङले अवैध रुपमा जुवातास खेलाएको सुईंको पाएपछि प्रहरीले छापा हानेको हो । ताल खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको..